မရမ်းကုန်း၊ မင်းဓမ္မလမ်းအနီးရှိ (973 Sqft) ကျယ်ဝန်းသည့် ဂရန်အမည်ပေါက် Royal Theikdi အဆင့်မြင့် ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10144079 အတွက် Sustain Construction Co.,Ltd သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Sustain Construction Co.,Ltd ပိတ်ရန်
ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ (1080 Sqft) ကျယ်ဝန်းသည့် 68 Residence ကွန်ဒိုအခန်း ရောင်းရန်ရှိသည်။
6,300 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10144027 အတွက် United GP Development Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
United GP Development Co.,Ltd. ပိတ်ရန်